ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ မူကွဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်နေဟု ဆို။ ဗိုင်းရပ်စ်တွင် ဗီဇပြောင်းလဲပုံမှာ ဗြိတိန်၌ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသော ကူးစက်မှုအလွန်မြန်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် အလားတူနေဟု ပြော။ နိုဝင်ဘာစောစောပိုင်းတည်းက တွေ့ရှိခဲ့ – H2Oupdatenews
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ မူကွဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်နေဟု ဆို။ ဗိုင်းရပ်စ်တွင် ဗီဇပြောင်းလဲပုံမှာ ဗြိတိန်၌ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသော ကူးစက်မှုအလွန်မြန်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် အလားတူနေဟု ပြော။ နိုဝင်ဘာစောစောပိုင်းတည်းက တွေ့ရှိခဲ့
oungmarine11@outlook.com 24/12/2020	No Comments
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မူကွဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်တစ်မျိုးမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသည့် ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်နှင့် နီးစပ်စွာ တူညီသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သိပ္ပံနှင့် စက်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနကောင်စီ (BCSIR) ၏ ဗီဇသုတေသနဓါတ်ခွဲခန်းက ပြောဆိုသည်ဟု Dhaka Tribune က ယနေ့ရေးသားသည်။
ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလစောစောပိုင်းတည်းက ၎င်းဗိုင်းရပ်စ်၏ မျိုးရိုးဗီဇအစီအစဉ်ကို စစ်ဆေးခဲ့ရာ အဆိုပါမူကွဲဗိုင်းရပ်စ်မှာ ဗြိတိန်နှင့် ပီရူးနိုင်ငံတို့တွင် တွေ့ရှိရသည့် ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲနှင့် ဆင်တူသည်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း BCSIR ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာအရာရှိ ဒေါက်တာ မိုဟာမက်ဆလင်းခန်က ကြာသပတေးနေ့၌ အတည်ပြုသည်။
သို့သော်လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် ရှိနေသည့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ ဗီဇကွဲပြားနေခြင်းမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေသကဲ့သို့ ဟုတ်-မဟုတ် သေချာစွာ မသိရှိရသေးကြောင်း၊ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းအစီအစဉ်ကို အပြီးသတ်လေ့လာပြီးစီးသည့်အခါ ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်သစ်၏ ကူးစက်နိုင်စွမ်းကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိပ္ပံဆိုင်ရာအရာရှိက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကူးစက်ဗေဒ၊ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် သုတေသနဆိုင်ရာအင်စတီကျု့ဒ် ( IEDCR ) ကမူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရခြင်း၏ အဓိက အရင်းအမြစ်မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ခရီးသွားများဖြစ်မည်ဟု ယူဆသည်။
အင်္ဂါနေ့တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံက ပုံမှန်ထက် အဆပေါင်း ၇၀ အထိ ပိုမိုကူးစက်စေနိုင်သည့် ဗီဇပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲ B.1.1.7. သို့မဟုတ် Variant of Concern 202012/01 (VOC-202012/01 ) ကြောင့် ကူးစက်မှု စံချိန်တင် မြင့်တက်ခြင်းသတင်းနှင့်အတူ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အရေအတွက်နှင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှု ခံယူရသူများ တိုးမြင့်လာခြင်းတို့ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏အဆိုအရ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပွားသော ရောဂါကူးစက်မှုမျိုးကို သြစတြေးလျ၊ ဒိန်းမတ်နှင့် နယ်သာလန်တို့၌ အရေအတွက် အနည်းငယ်စီ တွေ့ရှိရကြောင်း၊ အလားတူ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲလျှက်ရှိသည့် ဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲများကို တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ ကူးစက်လျှက်ရှိခြင်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ရပ်တန့်စေရေးအတွက် နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ခန့်တို့က ဗြိတိန်နှင့် တောင်အာဖရိကတို့မှ ခရီးသွားးလာသူများအတွက် ၎င်းတို့၏ နယ်စပ်ဝင်ပေါက်များကို ပိတ်ပင်ထားကြသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွင်လည်း နိုင်ငံအတွင်းသို့ မျိုးကွဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ် ဝင်ရောက်မလာနိုင်စေရန် ဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းအားလုံးဖြင့် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ အခြားသောနိုင်ငံများမှ ဝင်ရောက်လာသူများအတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် ၃-ရက်သာ ကွာရန်တင်းဝင်ရောက်ရသော်လည်း ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ရောက်ရှိလာသော ခရီးသည်တို့အနေဖြင့် ၇-ရက်အထိ အသင်းအဖွဲ့/ဆေးရုံတို့တွင် “ ကွာရန်တင်း ” ဝင်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗြိတိန်မှ ခရီးစဉ်များအတွက် သီးခြားလေကြောင်းလိုင်းများနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ကောင်တာများ သီးခြားသတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားသည်။
(( ကျွန်တော်များဆီတွင် လက်ရှိကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းမှာ မည်သည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်မျိုးကွဲဖြစ်ကြောင်း အတိအကျ ဖော်ပြခြင်းများ မတွေ့မိသေးပါ။ စောစောပိုင်းတွင် D614G ဟု သိရပြီး ကျွန်တော်နောက်ထပ် မတွေ့မိခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများတွင် တွေ့ရှိရသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှာ ကူးစက်မှု အလွန်လျှင်မြန်ကြောင်း ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ပြောဆိုသည့် သတင်းမျာလည်းး တွေ့ရပါသည်။
သို့သော်လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွင် လောလောဆယ် ဗြိတိန်ကဲ့သို့ ဗီဇပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကို တွေ့နေရပြီဖြစ်ကြောင်း ယခုသတင်းအရ သိရှိနိုင်ပါသည်။ အနီးဆုံးဖြစ်သော ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဖျားရှိ မိတ်ဆွေတို့ အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးသတိရှိကြပါရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
((( Dhaka Tribune., December 24, 2020, “ BCSIR: New Covid-19 variant found in Bangladesh. By: Kamrul Hasan.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
Previous Previous post: “ ကွာရန်တင်း “ ထားရှိခဲ့သူ ၁၁-ဦးတို့၌ ရောဂါကူးစက်ပုံအသစ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ဗြိတိန်၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲအသစ်ကူးစက်မှုကို ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ရှိဟု စင်္ကာပူပြောဆို။ ဗိုင်းရပ်စ်၏ ဗီဇပုံသဏ္ဍာန်သဘာဝကို အတည်ပြုနိုင်ရန် လတ်တလော ဥရောပမှဝင်ရောက်လာသူများအား စစ်ဆေးလျှက်ရှိ
Next Next post: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရလျှက်ရှိသော ထိုင်းတွင် မြန်မာဆန့်ကျင်ရေး အမုန်းစကားများ မြင့်တက်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာတို့အား တံဆိပ်ကပ်လျှက်ရှိ၊ သို့သော် ဗိုင်းရပ်စ်တွင် လူမျိုးခွဲခြားမှု မရှိဟုဆို။